notafihan’ny jiolahy – Midi Madagasikara
Tags: notafihan’ny jiolahy
Antsampanimahazo : Mpivarotra entamadinika notafihan’ny jiolahy, very ny 12 tapitrisa
Redaction Midi Madagasikara 14 janvier 2014 Antsampanimahazo, Mpivarotra, notafihan’ny jiolahy
Nisehoana fanafihan-jiolahy tao an-tanànan’Antsampanimahazo Antsirabe II amin’ny lalam-pirenena fahafito iny ny alahady 12 janoary teo. Jiolahy 12 lahy mirongo fitaovam-piadiana no tonga nanafika toeram-pivarotana iray. Ankeviny efa fantatr’ireo jiolahy ihany ny fisian’ny vola tao amin’ity toerana ity. Araka ny fantatra mantsy dia vola maty nandritra ny faran’ny herinandro teo no najifan’ireo jiolahy. Andro tsy fisokafan’ny…